How to configure LAMP !!! - Ubuntu-MM Q&A
How to configure LAMP !!!
LAMP မှာ Wordpress ထည့်ပြီး တခြား ကွန်ပျူတာတွေကနေ ဘယ်လိုယူသုံးရပါလည်းခင်ဗျာ
LAMP install လုပ်ပုံနဲ့ Wordpress ကို LAMP မှာ install လုပ်ပုံတွေကိုသိချင်ပါတယ်။
asked Mar 19, 2015 in Server by Shwe Tun (970 points)
HOW TO! I am justabeginner. Bro, with all respects, there are too many ways to install LAMP stack. But i would go onaway that i used to. ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ tasksel ဆိုတဲ့ app ကို install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
***To Install tasksel***
sudo apt-get update && sudo apt-get install tasksel
Then, Terminal မှာ sudo tasksel လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ LAMP component အပြင် အခြား Server components တွေကို Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ LAMP Server Installation ဖြစ်ပါတယ်။ MYSQl က password ထည့်ပေးရပါမယ်။
To Install Wordpress!
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ Wordpress tar ကို download ဆွဲပါ။ >>>> www.wordpress.org (or) >>>> http://wordpress.org/latest.tar.gz You can download by your options. နောက်အဲဒီ wordpress tar extension ကို Desktop ပေါမှာ extract လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်အဲဒီ extract လုပ်ထားတဲ့ file ကို /var/www/html/ ကို copy ကူးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်wordpress အတွက် Database ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ component တစ်ခု ဖြစ်တယ့် SQL buddy ကို install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
To Download Sqlbuddy!
နောက်အဲဒီ mysql zip extension ကို Desktop ပေါမှာ extract လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်အဲဒီ extract လုပ်ထားတဲ့ file ကို /var/www/html/ ကို copy ကူးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မိမိ web browser မှာ ရိုက်ပါ၊
နောက်sqlbuddy မှာ Database တစ်ခုဆောက်ပါ။ ပြီးရင် ထိုDatabase မှာ username နဲ့ password ကို create လုပ်ပါ။
***To work with wordpress***
Web Browser မှာ http://youripaddress/wordpress လို့ရိုက်လိုက်ပါ၊ မိမိsqlbuddy မှာ create လုပ်ထားတဲ့ Database name နဲ့ Username နဲ့ Password တွေကို အဲဒီwordpress မှာထည့်ပေးပါ၊ ပြီးရင်နောက်တဆင့်အနေနဲ့က wp-config.php ကို create လုပ်ပေးဖို့ပါ၊
***To Create wp-config.php***
sudo vi /var/www/html/wordpress/wp-config.php
ပြီးတော့ wordpress မှာပြထားတဲ့ code တွေကိုထို wp-config.php file ထဲသို့ကူးထည့်ပေးပါ။ အဲဒီ Step ပြီးရင်တော့ wordpress ကိုinstall လုပ်ခဲ့ပြီးပီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်မိမိ create လုပ်ထားခဲ့တဲ့ username and password နဲ့oင်လို့ရပါတယ်။
သူများစက်ကနေ wordpress ကိုလှမ်းကြည့်ရန် အတွက်ကတော့ သူများ browserမှာ http://youripaddress/wordpress ############################################
Hope You Enjoy It!!! Just Sharing! Pls forgive me if my explanation doesn't fit for you much.
answered Mar 20, 2015 by KyawSithu (440 points)
selected Mar 26, 2015 by Shwe Tun
ဒါတွေကတော့ Ubuntu မှာ LAMP သွင်းတဲ့ပုံတွေနဲ့ Wordpress သွင်းပုံလင့်ခ် တွေပါ။
ဒါပေမယ့် Desktop မှာ Wordpress ပဲစမ်းချင်တာဆိုရင် Lamp သွင်းတာထက် XAMPP တွေ WAMPP တွေပဲ သွင်းစေချင်ပါတယ်။ LAMP သွင်းပြီး ပြန်ဖြုတ်ရင် Dependency တွေကျန်နေနိုင်သလို အကုန်ရှင်းအောင်လည်း ဖြုတ်ရခက်ပါလိမ့်မယ်။
Lamp Stack ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ LAMP ကို သူ့ Library အောက်မှာပဲ သီးသန့်ထားမှာမို့လို့ Dependency လည်း ပြသနာ မဖြစ်သလို ဖြုတ်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။ Wordpress ပဲလေ့လာမှာ Website ကိုစက်ထဲမှာပဲ စမ်းကြည့်ရုံပဲဆို ဒါလေးပဲ သုံးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
answered Mar 20, 2015 by kokoye2007 (7.9k points)
how to install, configure JuJu Server
asked Mar 26, 2015 in Server by Shwe Tun (970 points)
How to easily configure vpn for ubuntu as US connection to use some software not available in our country
asked Apr 24, 2017 in Beginner by Aung Myo Oo (190 points)
how to connect or configure Ubuntu and microsoft window 7,etc....
asked Jun 28, 2015 in Beginner by HtetMyet (180 points)
How to fix dpkg error,I've been tried sudo dpkg --configure -a but still error ?
asked Jun 1, 2015 in Intermediate by ko kophyo (340 points)
How to install zawgyi font on digitalocean server for ubuntu18.04?
asked Dec 20, 2018 in Server by Thura Zaw (110 points)